Xukuumaddii muranka dhalisay oo lagala cabsaday baarlamanka & fashil bilowday – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Mareeg.com: Qorshihii maanta baarlamaanka Soomaaliya lagu horgeyn lahaa xukuumadda cusub ee RW Cumar C/rashiid ayaa fashilmay, kadib markii ay soo wajahday mucaarada xoogan oo ka timid dhanka xildhibaanada.
RW Cumar C/rashiid ayaa markii uu ogaaday in maanta baarlamaanku diidi doono xukuumadiisa go’aansaday inuu la laabto xukuumadaas, islamarkaana la siiyo 14 maalmood oo dheeraad ah si uu wax uga badelo xubnaha Golaha Wasiirada.
Warqad uu soo qoray RW Cumar oo loo gudbiyey gudoonka baarlamaanka ayaa la filayaa in maantaa lag hor aqriyo baarlamaanka Soomaaliya, taasoo uu ku codsanayo in la siiyo 2 todobaad oo uu wax uga badelo xukuumadda muranka dhalisay.
Qorshahaan waxaa la sheegay iney isku waafaqsan yihiin xafiiska RW Cumar iyo madaxtooyada Soomaaliya oo markii hore lag shaki qabay iney gacan weyn ku laheyd soo noqoshada qaar badan oo ka tirsan wasiirada muranku ka jiro.
Baarlamaanka ayaa la filaayaa in codsiga ra’iisul wasaaraha uu aqbalo, si isbedelka la sheegay loo sameeyo, hase ahaatee waxaa muuqata in fashil soo wajahay RW cusub iyo madxtooyada iyo weliba kooxda Dam Jadiid.
Quusta Cumar C/rashiid iyo madaxtooyada ayaa timid kadib markii arbacadii lasoo dhaafay baarlamaanku diiday codsi ka yimid RW Cumar oo ahaa in laga ogolaado inuu xukuumadda Golaha Shacabka geeyo 22-ka bishaan.
Baarlamaanka oo arrintaas cod u qaaday ayaa go’aamiyey in maanta ah oo 17-ka bisha Janaayo 2015 RW xukuumadiisa horkeeno baarlamaanka si loogu qaado codka kalsoonida, hase ahaatee sida muuqata xukuumadaas waa la gala cabsaday baarlamaanka.
Wasiirada sida weyn qaar ka mid ah xildhibaanadu u diideen ayaa kala: Faarax Sheekh C/qaadir, C/kariim Xuseen Guuleed, Xuseen Cabdi Xalane iyo C/llaahi Maxamed Cali (Sanbaloolshe).
Shalay oo jimco aheyd waxaa shiray xildhibaano badan, kuwaasoo ballan ku qaaday iney maanta dhulka la dhacaan xukuumadda Cumar C/rashiid.